Aakar November 25, 2008
“कुरा गर्‍यो, कुरा कै दु:ख” भनेजस्तो भएको छ, परिवार नियोजन संघ का भुतपुर्व अधिकृतलाई । यता फर्क्यो समस्या, उता फर्क्यो समस्या । समस्याका विच मै रहेर समाधान खोज्न व्यस्त छन्, उनी रामहरी शर्मा । घरमा श्रीमती को कचकच अनि समाज मा पनि उनकै चियो र चर्चा चलिरहेको छ । यो सबै सम्झँदा, रामहरीलाई कहिलेकाँहि त यो घर अनि समाज छाडेर निकै पर जान मन लाग्छ, जहाँ केही को झमेला नहोस् । दर्शनमा त राम्रै लाग्छ घर र समाज देखि टाढा जान, तर व्यवहारमा चटक्कै माया मार्न पनि सकिँदैन । मान्छे मा लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि नहुने हो, भने त त्यो मान्छे को काम पनि छैन । स्वार्थ, लोभ अनि मायामोह मै त संसार चलेको छ, रामहरी आफ्नो मन बुझाउँछन् ।
घरमा जवान छोरीहरु छन्, अनि सबैको बिहे गर्ने उमेर भैसकेको छ, रामहरी को बुझाइ मा । तर अहिले को जमानामा बिहे ले नै ढाड भाँच्छ भन्ने कुरा पनि बुझेकाछन्, उनले । सानो गाँठिको मान्छे, तर बाहिरबाट हेर्दा उनको निकै छ भनेजस्तो लाग्छ । तर जसले यथार्थमा भोग्छ, उसैलाई थाहा हुन्छ नि, उसको स्थिति । छोरीहरु सबै पढेका छन्, तर अहँ जागिर भने छैन, मात्रै एउटि कान्छी छोरी जागिर खाने छिन्, एउटा प्राइभेट फाइनान्स कम्पनि मा ।
परिवार नियोजन संघ मा नै वर्षौँ बिताएका रामहरी का ६ वटि छोरीहरु छन् । छोरोको आसैआसमा आधा दर्जन सन्तान सबै छोरीहरु भएपछि, रामहरी को चेत खुलेको थियो । जागिरकाल भरि देश विदेश डुलिरहे, घुमिरहे, “दुई सन्तान ईश्वरको वरदान”, अनि “छोरा-छोरी बराबरी” भन्दै । तर हैन, आफैँमा चाँहि किन लागु भएन, यतिखेर रामहरी सोच्दैछन् । आफैँलाई धिक्कार्नु सिवाय अब उनीसँग अर्को उपाय पनि त छैन । अहिले उनी छोरीहरु को बिहे को पिर ले अनि समाजमा बढेको चियो र चर्चो का कारण हताश देखिन्छन् । आखिर दर्शनमा जे छाँटिएपनि, अनि जे भनेपनि, आफ्नो सन्तानको बिहेवारी त गर्दिनैपर्छ ।
सानो घर छ, त्यसैमा कोचिएर बसेका छन्, सबैजना ! यो महंगी अनि यस्तो दरिद्रता को अवस्था आउला भनेर उनले सोचेकै थिएनन् । गाउँगाउँ उनी डुल्ने गर्थे, “दुई सन्तान ईश्वरको वरदान” भन्दै, अनि आफ्नै घरमा चाँहि “ईश्वरले दिएको जति हातथाप्नुपर्छ” भनेजस्तो गर्थे, अझ “छोरा छोरी दुबै बराबरी” हुन्छन् भन्ने कुरा उनी मान्दै मान्दैनथिए घरमा । “हरे ! बेलैमा बुद्धि किन आएनछ ! मेरो”, श्रीमतीले एकदिन गरेको कचकचका कारण अनायासै उनको मुखबाट यी कुराहरु फुत्कन पुगेका थिए । अनि त्यसैको निहुँमा पनि धेरैदिन बोलचाल भएन बुढा-बुढि को ! अझ छोरीहरुले, “तपाईलाई हामीहरु बढि भा’को” भनेर घुर्क्याए पनि, निकै दिनसम्म ।
हुन त, रामहरीलाई कुनै गुनासो छैन, आफ्नो परिवार प्रति । गुनासो रहेको छ त केबल आफ्नो गराइ अनि भोगाइ प्रति । जिवनभर आफूले जे अर्ति उपदेश दिएर हिँड्यो, तर आफैँले भने टेरेन, अनि जाकियो भड्खालो मा, उठ्न नसक्ने गरि । अब आफ्नो दु:ख बेसाउने पनि कोही छैन, बाबु आमा माथि आकाश बाट तारा बनेर हेरिरहेकाछन्, जस्तो लाग्छ उनलाई । श्रीमती उनको कुरै बुझ्दिनन्, अनि त्यत्तिकै झगडा ।
आफ्नो जविनभोगाइ को उनी निचोड निकाल्न व्यस्त छन् । छोराको आसमा छोरीको लस्कर लगाइयो, आखिर छोरा पनि त भएन । छोरा भएको भएपनि, के नै हुन्थ्यो होला र (?) सबैको सुन्ने गरेको छु, कोही यसो गर्‍यो भन्छन्, कोही त्यसो गर्‍यो भन्छन् । वास्तविकता त्यही भोग्नेलाई नै थाहा होला । अहिले म सन्तुष्ट छु, कारण छोरीहरु पनि छोरासमान नै छन् भन्ने कुरा बुझ्दैगइरहेको छु, सन्तान सुख त छ नि मलाई । तर पनि खै, किन आफैँदेखि निराश लागेर आउँछ । मैले जिवनमा सबैभन्दा ठूलो भुल गरेछु, “परिवार नियोजन” नगरेर । “परिवार नियोजन” को बारेमा थाहा नहुनेकुरा पनि हैन, “परिवार नियोजन” कै अधिकृतलाई, जसले सयौँ यस्ता शिविरहरु पनि चलाएका थिए । तर त्यतीखेर उही रामहरी छोरो कुरेर बसेका थिए । आँखा अगाडि भएको समस्या को उनले हल निकाल्नै सकिरहेकाछैनन् । उनी अझै त्यही घरव्यवहार को पिरले रन्थनिएकाछन् ।
भूत बितिसक्यो, भविष्य के हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर वर्तमान मा उनी छातिमाथि ढुंगा राखेर बाँचिरहेकाछन्, हाँसिरहेकाछन् । अनि रामहरी “आफूले भनेर, आफैँले काम नगर्ने, हामी आमनेपालीहरु को प्रतिनिधित्व गरिरहेकाछन्” । हामी नेपालीहरु आफैँ माथि व्यंङ्ग्य गरिरहेकाछौँ र तितो यथार्थमा बाँचिरहेका छौँ ।
(मनोवाद शैलि को लघुकथा)